5 Abathengi abakwi-Intanethi abalawula iholide | Martech Zone
5 Abathengi abakwi-Intanethi abalawula iholide
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 7, 2012 Lwesine, Disemba 6, 2012 Douglas Karr
Abantu baseMaxymiser babelane nge-infographic yabo yamva nje, 5 Abathengi abakwi-Intanethi abalawula ii-Interwebs zeHolide. Ndiyayivuyela ingqiqo enje ngale kuba uninzi lwedatha phaya lukhomba kumthengi ophakathi… kwaye emva koko uyilahle idatha ngokwesini, ubudala kunye nomvuzo. Inyani yile yokuba zininzi izizathu ezahlukeneyo zokuba abantu bathenge.
I-Maxymiser ichonga abantu aba-5 abanempembelelo kubathengi. Bangabazingeli bezivumelwano, i-shopper yokuqala ye-intanethi, i-shopper e-touchy e-touchy, i-shopper ye-needs-inspiration kunye ne-shopper yomzuzu wokugqibela.
tags: eCommercekwi-infographickuthengwa kwi intanethiIvenkile yee-intanethiabantuezivenkileni
Amanani aBumbeneyo anokuKwenza ungalunganga
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2012 ngo-9: 56 AM
Njengokuba ubomi bam buxakekile, kufuneka ndizithathele ingqalelo njengoluhlobo lokugqibela lokuthenga - okokugqibela ngomzuzu wokugqibela. Kuhlala kubonakala ngathi lisekhona ixesha lokwenza lento nokwenza le ngaphambi kweKrisimesi naphambi kokuba wazi, ngumhla wamashumi amabini kuDisemba kwaye awunazo nezipho zosapho lwakho.
Ngomhla wama-10 ku-Disemba 2012 ngo-5: 28 PM
Ndikunye nawe, @PetieKelly: disqus! Ngapha koko, abantwana bam baqhele ukufumana ezinye izipho emva kweeholide… andinako nokuma ndime emgceni ngomzuzu wokugqibela!